Taurus sy Scorpio mifanentana: fisakaizana, fitiavana ary firaisana - Famantarana Zodiac
Ny Dikany Amin'ny Hevitry Ny Nofy
Hevitry Ny Tandindona
Taurus sy Scorpio mifanentana: fisakaizana, fitiavana ary firaisana
Ny laharam-pahamehana Taurus sy Scorpio mifanentana amin'ny degre dia mahatonga ny mercury ho thermometer! 'Steamy' no teny mety ilazana ny fiainam-pitiavan'izy ireo. Ny fitambaran'ny Taurus-Scorpio dia momba ny fikatsahana fahafinaretana sy fanatanterahana ny filan'ny nofo!
Samy tia manafina tsiambaratelo koa i Taurus sy i Scorpio. Saingy, ny fitazonana tsiambaratelo dia zavatra tsara. Fa maninona Izy io dia ahafahan'ny fifampitokisana miavaka eo amin'izy ireo. Ankoatr'izay, misy fahatokisan-tena amin'ny fahalalana ny lozisialy efitra fatoriany mijanona ho sokajiana! Reko izao ny tononkiran'i Go-Go: 'Voaisy tombo-kase ny molontsika!'
Tian'ireto fanahy roa ireto ny miaraka irery. Ny tranon'izy ireo no tempolin'ny fitiavana. Fondness amin'ny fotoana tokana dia sabatra roa lela an'ity duo ity na izany aza. Faran'izay lehibe ny fanakatonana an'izao tontolo izao ho an'ny tsiambaratelo. Saingy, tsy salama foana. Ny fifandanjana dia tokony hitranga eo anelanelan'ny tokantrano-tantaram-pitiavana-miserana sy ny fiainana ara-tsosialy salama.
Miaraka amin'ny teny filamatr'i Taurus hoe 'manana' aho ary ny teny filamatr'i Scorpio dia hoe: 'Maniry aho', misy mpivady tonga lafatra! Ny toetra amam-panahy dia zavaboary ara-nofo miaraka amin'ny mason'ny tsara tarehy. Taurus sy Scorpio mahalala izay tadiavin'izy ireo sy ny fomba ahazoana azy! Hitan'izy ireo ny fitoviana amin'ny fomba mitsiriritra na 'maniry' zavatra.
Taurus sy Scorpio dia mamorona havana amin'ny fomba fanatanterahana ny faniriany koa. Ity duo ity dia tsy manana olana amin'ny fanatanterahana ny filan'ny tsirairay. Mipoitra ny lalao fitiavana mamitaka sy erotika rehefa mivondrona i Taurus sy Scorpio!
Taurus sy Scorpio Lisitry ny atiny
Taurus sy Scorpio fampifanarahana
Fitiavana Taurus sy Scorpio
Firaisana ara-nofo Taurus sy Scorpio
Taurus Lehilahy sy Scorpio Vehivavy mifanentana
Taurus Vehivavy sy Scorpio Lehilahy mifanentana
Taurus sy Scorpio Love Match Wrap-Up
Miverina amin'ny fifanarahana Zodiaka rehetra
Hiverina amin'ny Zodiac Signs rehetra
Raha resaka mifanentana dia mahazo marika ambony ny lalao fitiavana Taurus sy Scorpio! Ny ohabolana 'mifanohitra manintona' dia efa antitra noho ny antony: Satria marina izany! Saingy, ny fifandraisana misy eo amin'i Taurus sy Scorpio dia mihalalina lavitra noho izany! Ireo roa ireo dia mifandray amin'ny sehatra ara-pihetseham-po sy erotika ary tsy voatery araka izany filaharana izany.
Ireo lovebirds ireo dia mitazona ny fifandraisana ambany hatrany ambany noho ny fironana miafina. Mety ho herinandro na volana maromaro vao miteny amin'ny faribolana akaiky ny namany sy ny fianakaviana izy ireo fa nahita fitiavana maharitra. Ny ampahany amin'ny tsiambaratelo dia noho ny toetrany miafina. Ny antony hafa hijanonany rehetra dia ny faniriany hanana antoka maharitra. Tsy misy dikany ny filazan'izy ireo an'izao tontolo izao fa mifankatia izy ireo raha toa ka hanjavona ny raharaha.
Ny fanirian'izy ireo hialokaloka dia avo sy miharihary amin'ny fitokana-monina any. Rehefa miara-monina i Taurus sy Scorpio dia mety hipetraka ao amin'ny lavaky ny Batman koa izy ireo. Tian'izy ireo ny miaraka irery ao amin'ny fiereny. Raha nieritreritra izy ireo fa ho afa-miala amin'izany, dia ho lasa fialamboly ho fialamboly izy ireo! Ny fandaozana an'izao tontolo izao any ivelany dia mitondra fiadanam-be ho azy ireo. Izy io koa dia mamela azy ireo hidina any amin'ny tenany mitanjaka amin'ny lafiny rehetra.
Scorpio dia manome an'i Taurus ny fiarovana tadiavin'izy ireo mafy amin'ny fifandraisana. Taurus dia manampy an'i Scorpio hipetraka ary hiantoka ny eto sy izao. Samy tia ny kanto sy ny mozika mahafinaritra ireo toetra roa ireo. Mandritra ny fotoam-pahakiviana ao an-trano dia fotoana voalohany tokony hankafizana izay tian'izy ireo indrindra. Ankasitrahan'izy ireo ny fahafahany manao izany raha tsy misy fanelingelenana avy any ivelany.
Ny fifandraisana Taurus sy Scorpio dia mitaky an'ity Duo ity hampiorina fahatokisana. Scorpio dia fanahy tsy azo antoka. Ny fahatokisana olona manana ny tsiambaratelony akaiky indrindra dia tsy fiheverana maivana.
Taurus dia azo antoka rehefa tonga izy ireo. Taureans dia miorina, tsy miova ary tsy miovaova. Hanome toerana malefaka hipetrahan'i Scorpio mandritra ny fotoan-tsarotra izy ireo. Noho izany dia miadana ny fahatokisan'i Scorpio fa farany.
Taurus dia miroborobo amin'ny fahatsapana fitoniana mitovy. Mila mahatsapa izy ireo fa toy ny hoe manana fifandraisana marim-pototra tsy misy fandrahonana fanovana. Tsy miovaova ny fahatokisan'i Taurus, ka tsy sendra saro-kenatra izy ireo. Manontany tena izy ireo hoe inona ny antony manosika ny olona iray. Fepetra voajanahary amin'ny fitandroana tena.
Ny olana dia mety hanapaka ny fatorana azo itokisana rehefa lasa saro-piaro i Scorpio. Raha manontany momba ny tsy fivadihana i Scorpio, manontany tena i Taurus ny antony. Tsy ela akory dia nieritreritra i Taurus fa i Scorpio no manana feon'ny fieritreretana meloka. Manontany tena izy ireo raha misy tsy fanao tsy nolazaina!
Rehefa mitana ny filaminana eo amin'ny fiarahana dia mamony ny fitiavana. Mitombo ny fifampitokisana. Avy eo dia tsy manana olana kely ity duo ity amin'ny fizarana ny tsiambaratelony amin'izy samy izy. Taurus dia mahita mpiara-miasa marin-toerana ao Scorpio ary ny mifamadika amin'izany. Ny fitoniana dia mandray anjara amin'ny toetra milamina amin'ny fifandraisan'izy ireo. Efa akaiky ny fitiavana.
Ny fifandraisana ara-pihetseham-po eo amin'i Taurus sy Scorpio dia mihalalina. Raha vantany vao mametraka fatorana izy ireo dia maharitra sy tsy azo jerena. Ity sendika ity dia modely ho an'ny fifandraisana hafa. Ireo any ivelany dia manontany tena hoe ahoana no hananganana fifandraisana mitovy amin'izany. Ny fitsiriritana ny haren'ny fifandraisana Taurus-Sagittarius dia mahazatra.
rahoviana indray no tonga ny kometan'i halley
Ny lalao fitiavana Taurus sy Scorpio dia tsy manana olana amin'ny fanafanana ny efitrano fandriana. Amin'ny maha-supersensuales olona mifanaraka amin'ny natiora naha-izy azy voalohany, ity mpivady ity dia tsy manana olana mifandray amin'ny sehatra ara-batana. Ny hery mitaona an'i Taurus dia ny planeta Venus. Ny planeta mitondra an'i Scorpio dia i Mars. Mila miteny bebe kokoa ve isika? Saingy hataonay satria be dia be ny holazaina momba ity paika Zodiaka ity! Araka izany, ny fitiavana sy ny fifandraisana erotika dia ao amin'ny lisitry ny faniriana voajanahary Taurean. Ny teny filamatr'i Scorpio hoe 'Maniry aho', hoy izy rehetra. Izy ireo dia zavaboary feno filan-dratsy mitady hanao manidina rehefa manao fifandraisana ara-batana!
Ny fanintonana ara-batana eo amin'i Taurus sy Scorpio dia tsy azo lavina. Izay olona ivelan'ny fifandraisana dia afaka mahita azy mazava toy ny endrika tarehin'izy ireo. Ny minitra itenan'ireto maso mihidy roa ireto dia toa efa mihodina ny fihaonan'ny faty!
Ny fiarahana mampiaraka dia fotoana fohy ahafahan'ny fifamatorana mampihetsi-po haingana. Toy ny hoe mandingana ny hevitra momba ny finamanana ireto roa ireto ary mitodi-doha mankany amin'ny lalaon'ny mpifankatia. Toy ny hoe efa mifankahalala i Taurus sy Scorpio. Avy hatrany ny 'kitika'. Ny fanaovana fifandraisana ara-pientanam-po dia voajanahary toy ny mifoha eo akaikin'ny tsirairay aorian'ny fahasambarana ara-batana!
Scorpio dia mahatonga an'i Taurus purr toy ny saka miaraka amin'ny toetrany feno fitiavana sy firaiketam-po. Taurus dia mamaly ny filan'ny Scorpio mahazatra, feno filan-dratsy! Ny menio ao amin'ny efitrano fatoriana dia manomboka amin'ny fanandramana ka hatrany amin'ny fanandramana fa mampanantena fahafaham-po madio ny andaniny sy ny ankilany!
Taurus sy Scorpio Communication
Sarotra ny fifandraisana fa mampihetsi-po amin'ity fifandraisana ity. Ny resadresaka mampihetsi-po sy ny fifandraisana akaiky dia manampy amin'ny fifanarahan'i Taurus sy Scorpio. Taurus sy Scorpio dia tsy mitovy amin'ny alina sy alina.
Eo amin'ny faran'ny mifanohitra amin'ny kodiarana zodiak any an-danitra izy ireo, ka mahatonga azy ireo ho hafa noho izay mety ho izy. Saingy, ny fahasamihafan'izy ireo dia ampy hanaporofoana fa manintona. Fa maninona Satria ny tsy fitovian'ny toetra dia mifameno. Fanahy mahatoky tena, mifampiresaka mora izy ireo.
Rehefa miresaka i Scorpio dia tsara fanahy i Taurus mandray andraikitra. Ny valin-tenin'izy ireo tamim-pitiavana dia nahatonga an'i Scorpio hamony sy hisokatra amin'ny fifandraisana matanjaka kokoa. Na dia tsy liana amin'ny zavatra tian'i Scorpio aza i Taurus, dia mihaino tsara izy ireo. Toy ny hoe fantatr'i Taurus fa ny sain'ny rehetra dia mila mahatsiaro tena ho voaro i Scorpio raha hisokatra.
Scorpio dia tia mizara ny fomba fijerin'izy ireo manokana momba an'izao tontolo izao sy ny anjara asany amin'izany. Amin'ny alàlan'ny fizarana, Taurus dia mianatra zavatra iray na roa momba ny fomba hijerena ny fiainana amin'ny mason'i Scorpio. Amin'ny alàlan'ny mason'i Taurus, Scorpio dia mianatra mankasitraka ireo zavatra ananan'izy ireo. Ny fomba fijerin'izy ireo vaovao dia mampitombo ny fankasitrahana ary manamaivana ny faniriana bebe kokoa.
Tia ny fiainana sy ny tontolo voajanahary i Taurus. Scorpio dia famantarana mifanitsy amin'ny fandringanana sy ny fahafatesana. Na izany aza, Scorpio dia manana fomba iray hahatakarana ny lanjan'ny fiainana. Taurus dia mahatakatra ny filan'ny fahafatesana ho toy ny fanampiana lanja ny fisiana. Avy amin'ny tendrony roa mifanohitra amin'ny spectrum, Taurus sy Scorpio dia mahita fa mora ny mihaona eo afovoany. Eo izy roa dia samy mamantatra ny tena hatsaran'ny fiainana sy ny fihodinan'ny fahafatesana.
Fifandonana Taurus sy Scorpio
Na dia lafatra aza ny fifandraisan'izy ireo, ny fifandraisana Taurus sy Scorpio dia misy fifandonana. Misy fahasamihafana kely eo amin'ireto olona tia moka ireto. Voalohany dia ny fomba fijerin'izy ireo ny fihetsem-po. Faharoa ny fahasamihafana eo amin'ny fomba fijerin'izao tontolo izao.
Taurus dia fanahy mampihetsi-po izay tia lalina raha vao mahita ny fanahy mety ho tiavina izy ireo. Scorpio dia mihevitra ny hafa ho vady mety ho an'ny fifandraisana ara-pihetseham-po. Saingy, rehefa mifanipaka izy ireo, dia tsy afa-nanoatra i Scorpio noho ny halemem-panahin'i Taurus.
Ny mpikirakira Scorpio malefaka dia miova tsara noho Taurus. Scorpio dia mahita an'izao tontolo izao ho toerana misy fientanam-po sy fotoana betsaka. Taurus dia mihevitra izao tontolo izao ho loza mitatao ho an'ny filaminany. Ny fanovana dia tsy azo vinavinaina ary tsy manavakavaka. Taurus dia mahita ny fifaneraserana amin'izao tontolo izao manokatra ny tenany amin'ny ady amin'ny fanovana.
Fifandonana manan-danja kokoa no misy eo amin'ireo fanahy mavitrika ireo rehefa mientanentana amin'ny fahatezerana. Eto dia atambatra ny omby romotra sy ny fanindron'ny maingoka! Taurus dia manetsika ny tandrony noho ny fialonana na rehefa manosika azy ireo hanova azy ireo i Scorpio. Scorpio dia mamaky ny baomba sy ny poizina rehefa miseho ny fialonana! Ny olana mitovy amin'izany dia miteraka fahatezerana ao Taurus sy Scorpio. Saingy, ny fanehoan-kevitry ny olona tsirairay dia samy hafa, mampiavaka azy ary maharitra!
Taurus sy Scorpio Polarity
Ny polarities misy fiantraikany amin'ity fifandraisana ity dia mamolavola Taurus sy Scorpio mifanentana. Ny mari-pamantarana rehetra ao amin'ny zodiaka dia mifanaraka amin'ny iray amin'ireo polarities roa. Yin sy Yang no polarities izay ifanarahan'ny famantarana tsirairay.
Yin dia hery vehivavy. Lehilahy i Yang. Rehefa miresaka momba ny vehivavy sy ny lahy dia tsy misy ifandraisany amin'ny lahy sy ny vavy ny firesahana toy izany. Fa kosa, ny mpandika teny dia iray mamaritra ny herin'ny hery mitaona manokana. Ho an'ny angovo vehivavy, ny olona iray dia afaka manantena fitaomana mihetsika, mora tohina ary misokatra. Miaraka amin'ny herin'ny masculine, ny olona iray dia afaka manantena herisetra mahery setra sy mahery setra. Yin sy Yang energies, rehefa mandanjalanja, dia mifameno.
Taurus sy Scorpio dia samy manana ny polarity. Mifanitsy amin'ny herin'i Yin ireo famantarana; Izany dia mahatonga azy ireo hisokatra amin'ny hafa, sy handray ary hangoraka. Diso ny fahatsapana fa tsy ampy ny angovo Yang izay miteraka tsy fandanjana mandeha ho azy. Ny fandriam-pahalemana sy ny firindrana dia azo atao eo amin'ireo famantarana roa mitovy fizarana.
Miaraka amin'ny polarity mifandanja, Taurus sy Scorpio dia manana fatorana akaiky eo amin'ny saina. Afaka mifamaky ny sain'ny tsirairay avy manerana ny efitrano izy ireo. Ny fijerena fotsiny na ny fihetsiky ny vatana dia mitarika ny mpiara-miasa iray hamaly ny iray hafa. Ity duo ity dia afaka mamita ny eritreritry ny tsirairay. Rehefa miteny izy ireo dia hanomboka amin'ny fotoana iray toa ny hoe hahavita ny tenin'ny tsirairay.
Raha misy ny tsy fandanjalanjana dia hanjary tsy hiraharaha sy hasiaka mahery setra i Taurus sy Scorpio. Mba hamerenana amin'ny laoniny ny polarities aorian'ny polarisasiana dia mila mamihina ny herin'ny Yang izy mirahalahy ireto. Tsy maintsy masiaka izy ireo, mifantoka amin'ny hetsika ary mazoto.
libra lehilahy libra vehivavy eo am-pandriana
Ny lafiny Taurus sy ny Scorpio
Ny lafiny asehon'ireo famantarana kintana ireo dia naharesy ny fahombiazan'ny lalao fitiavana Taurus sy Scorpio. Ny lafiny iray dia elanelana misy eo amin'ireo famantarana kintana azo refesina amin'ny degre. Ny lafiny noforonin'ireo famantarana ireo dia 'mifanohitra.' Ny lafiny mifanohitra amin'izany dia midika hoe famantarana enina ny Taurus sy Scorpio. Ireo famantarana koa dia mifanohitra amin'ny kodiarana selestialy amin'ny lafiny ara-bakiteny.
Ny famantarana zodiaka amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny kodiarana selestialy dia toy ny fitaratra. Hita taratra amin'ny zodiaka mifanohitra ireo fahalemena sy tanjaka misy ankehitriny. Ny toetra mampiavaka ny famantarana mifanohitra dia samy hafa, fa misy kosa ny fahita mahazatra. Misy zavatra manintona momba ny tsy fitoviana misy eo amin'ny Taurus sy Scorpio koa. Mety manana asa karmika hiaraha-miasa izy ireo, na manana lesona ampianarina momba ny fiainana.
Ireo fambara fanoherana amin'ny kodiarana selestialy dia manana singa mifanentana avo. Na dia olona miavaka aza izy ireo, Taurus sy Scorpio dia manana olana kely amin'ny fiaraha-miasa. Ity pairing ity dia miteraka fitomboan'ny tena manokana ho an'ireo famantarana zodiaka.
Ireo toetra amam-panahy amin'ny lalao Taurus-Scorpio dia manana fomba iray hanazavana ny tanjon'ny fiainany mazava. Ny mpiara-miombon'antoka tsirairay dia manala ny voaly fanakorontanana ho an'ny iray hafa, manompo amin'ny fizahana zava-misy avy amin'izao rehetra izao. Tsy mifantoka amin'ny antsipiriany kely indrindra intsony ny sary feno. Toy ny mahita ny Cosmos amin'ny fitambarany.
Eoropa Taurus sy Scorpio
Ny fiantraikan'ny singa misy eo amin'ity duo ity dia mamaritra ny fahombiazan'ny fifandraisana Taurus sy Scorpio. Miaraka amin'i Taurus, ny hery miasa mangina dia ny tany. Scorpio dia latsaka eo ambanin'ny fitaoman'ny singa rano. Ny tany sy ny rano dia manamboatra mpivady mifanentana. Ireo toetra roa tonta dia mila tsy miova, tsy miovaova ary tsy miovaova. Mitaky fahatsapana filaminana ara-pihetseham-po amin'ny lalao fitiavana izy ireo.
Ny fifandraisana Taurus sy Scorpio dia mety hanomboka amin'ny fahazazany. Io no fifandraisana izay hanambadian'izy mirahalahy avy any amin'ny lisea. Na, ireo olon-tiany amin'ny oniversite izay manambady sy mitaiza. Ny fifandraisana dia mahazo aina toy ny an'ny jeans miloko ankafizin'ny olona iray. Milamina ny fivezivezena manomboka eo amin'ny sehatry ny mampiaraka ka miara-miaina toa tsy fanontaniana velively.
Ny mpivady toa an'i Taurus sy Scorpio dia mihevitra ny tempoly ho tempoly. Manana zoro mahafinaritra izy ireo manerana ny fonenana. Manaingo ny zoron-trano rehetra ny kanto. Ny fampiononana ankafizin'izy ireo dia isaky ny efitrano. Mora ho an'ity mpivady Tany sy Rano ity ny mamoy ny tenany ao an-trano.
Ny toetra eto an-tany an'i Taurus dia mahatonga azy ireo ho azo ampiharina sy ilaina. Ny toetran'ny rano Scorpio dia manonofy. Maniry sy manonofy i Scorpio. Taurus dia manentana ka ny nofinofin'i Scorpio dia afaka mahatsapa fisehoana feno. Na dia tsy mitovy aza, dia mifameno amin'ny lafiny rehetra izy roa.
Taurus dia mikasika ny saina sy ny fahaiza-manao mahazatra. Scorpio no toetra mampihetsi-po kokoa rehefa manenjika faniriana miaraka am-pototry ny fahatsapana izy ireo. Taurus dia afaka manampy an'i Scorpio hametraka ny tenany. Scorpio dia afaka manampy an'i Taurus hamaha sy hanaisotra ny fihenan'ny tenany. Tsy aiza akory fa ny efitrano fatoriana dia Scorpio ka afaka hanafaka ny vady!
Tsy mifanaraka amin'ny tabilao ny fifanarahana Taurus sy Scorpio! Ny Taurus Man sy ny Scorpio Woman dia nahatratra izany tamin'ny minitra nifampijeren'izy ireo. Ny Scorpio dia mahita ny lehilahy Taurus Man malefaka sy tsara fanahy. Ny toetrany malefaka dia manintona azy toy ny toetrany tsy miovaova. Hitany ny vehivavy Scorpio manintona sy manintona. Ny hatsarany sy ny hatsarany dia manintona eo noho eo. Vetivety dia hitany fa mitovy hevitra izy ireo. Ny fahitana ny marimaritra iraisana dia misy zavatra mampihetsi-po ny fahatsapana euphorika 'mahatsapa-soa'. Eny, samy tia firaisana sy sôkôla izy ireo!
Amin'ity pairing ity, ny Taurus Man dia mahita fahafaham-po amin'ny fahafaham-po. Izy dia mahazatra, milamina, ary mankafy ny fahafinaretana tsotra amin'ny fiainana izy. Raha miresaka momba ny fahafinaretana, dia samy manana ny fahafinaretana ny Taurus Man sy ny Scorpio Woman. Raha mahafinaritra, zavatra mety apetrak'ity mpivady ity! Ny vehivavy Scorpio dia tsy masiaka. Ampahany lehibe amin'ny fampiantsoana azy ny fahatokisany.
Miadana amin'ny teny i Taurus ary nanambara ny fihetseham-pony tamin'i Scorpio tamin'ny alàlan'ny valiny ara-batana. Tsy hoe tsy te hiteny ireo teny hoe 'tiako ianao'. Te hilaza ireo teny amin'ny fotoana mety amin'ny fomba tonga lafatra izy. Ny fanomezany fahaiza-miteny dia mahatonga azy ho toa mpangataka rehefa mpanamboatra menaka manitra izy.
taurus vehivavy taurus lehilahy astrology mifanaraka
Fiainana feno ilay vehivavy Scorpio. Mameno ny fotoana rehetra amin'ny fitiavany miaina izy. Mamiratra noho ny ala ao aminy ny masony. Ireo fitaovana avo lenta no takiany amin'ny fotoana rehetra. Taurus dia manana tsiro champagne amin'ny zavatra tsara tarehy. Ny vehivavy Scorpio dia manana ny tsirony amin'ny zavatra rehetra 'iriny.'
Avy eo dia milatsaka amin'ilay Taurus Man izy, i Scorpio dia tsy misalasala mampahafantatra ny fihetseham-pony. Izy dia be fitiavana, doting, ary flirty. Ny lehilahy Taurus dia mitaky ny tsy fivadihany. Mitaky izany ihany koa izy.
Ilaina ny asa handresena ireo fifandonana madinidinika ao amin'ny lalao fitiavana Taurus sy Scorpio. Mipoitra ny fifandonana rehefa mikasa ny Scorpio Woman sy Taurus Man. Taurus mandrindra, ary Scorpio manova ny fandaharana amin'ny ora fahiraika ambin'ny folo. Raha tsy manome azy ny fotoana ilainy amin'ny 'toerana an-doha' izy, ny toetran'ny Taurus Man dia afaka miovaova hatramin'ny farany. Indray mandeha amin'ny toe-tsaina ratsy, Taurus dia mandany ny fotoana mahafinaritra hitany mandanjalanja indray.
Raha tsy mahay mandanjalanja io fifandraisana io dia tapaka ny fifandraisana. Taurus sy Scorpio dia mety hijanona tsy hifampiresaka tanteraka. (Afa-tsy ny fanamarihana fohy sy teny vitsivitsy cuss safidy). Arakaraky ny fahatezeran'ireto roa ireto no maha voafetra sy mangidy ny serasera. Raha mania ny mpiara-miasa iray dia vaky ny afobe rehetra. Taurus dia ho romotra rehefa mandrovitra ny trano. Scorpio dia ho romotra raha mametraka lalao mifanaraka aminy rehetra.
Ny fifandraisana Taurus sy Scorpio dia manana toky lehibe. Ny Taurus Woman dia manapa-kevitra fa maniry ny Scorpio Man amin'ny minitra hitany izy. Tsy manana olana amin'ny fanenjehana izay tadiaviny izy. Tovovavy tia harena izy, mahalala izay iriny. Ny Scorpio Man no tandindon'ny faniriana. Izy dia maneho ny famaritana ny hoe 'mila' ary mitovy amin'ny Taurus amin'ny fanenjehana izay tadiaviny. Ny vehivavy Taurus dia tsara tarehy sy vonona. Ny fahasoavany mangina sy ny feony mampihetsi-po dia nahasarika azy. Tsy azo lavina ny manintona.
Ny Scorpio Man dia manizingizina fa izy irery no lehilahy tokana tamin'ny fianan'i Taurus. Tsy manana olana amin'ny fanekena ny fitakiana mahafinaritra ataony izy. Tsy mivadika amin'ny lesoka izy ary manizingizina ny fanoloran-tena mitovy. Izy dia ara-nofo, be fientanam-po ary tsara fanahy. Misy fifandraisana elektrika eo amin'i Taurus sy Scorpio. Toa tsy mihoatra ny natoraly ny fifandraisana. Vetivety dia mifampijery mangina izy ireo. Avy eo dia mifankahazo ny eritreritry ny tsirairay izy ireo tsy misy teny.
Milamina ny sambo rehetra raha tsy mandray andraikitra amin'ny jadona ilay Scorpio Man. Mahaleo tena ny Vehivavy Taurus ary tsy handefitra amin'ny lehilahy iray tompony manodidina azy. Raha lasa mpampijaly i Scorpio dia mivadika ho omby ilay vehivavy Taurean. Midina midina sy miompy ny tandroka, avelany hanjaka ny hatezerana. Segondra vitsy monja talohan'ny nanitsahany ny ego an'i Scorpio ary nametrahany fanontaniana avy eo.
Scorpio dia mila manao izay azony atao mba hitazomana ny vehivavy Taurus. Tsy mahazaka izy rehefa iharan'ny fandrahonana ny faritra mampionona azy. Ataony mba hahafaly ny vadiny ny ezaka rehetra ataony fa mila ekeny koa ny ezaka ataony. Ny tsy fankasitrahana ny fanoloran-tenany dia mitovy amin'ny tsy fananan'ny Scorpio tsinontsinona azy tanteraka.
Ny sakana eo amin'ny fifandraisana dia tsy manimba Taurus sy Scorpio mifanentana. Ny haavon'ny fanoloran-tenan'ny Scorpio Man dia tsy azo iadian-kevitra. Rehefa manolo-tena amin'ny Taurus izy dia tsy hitodika any aminy raha tsy maty tanteraka ny fifandraisana. Hihantona hatramin'ny farany mangidy izy. Mijanona amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny ady izy. Mijanona ao anatin'ny ady mahatsiravina sy ny fitsaboana mangina izy.
Ilay lehilahy Scorpio dia manana mpiady ao aminy. Hanao ady izy raha heveriny fa manana vintana hivelomana ny fitiavana. Ny tsy fankasitrahan'i Taurus ny fanovana dia mitazona ihany koa ilay Vehivavy Taurean. Hifikitra amin'ny lehilahy izy na dia mahazo aina aza. Hafahafa izany, saingy afaka mahazo aina izy amin'ny tsy fahazoana aina raha toa ka mametra-tena ho lava izy. Miaraka amin'ny toe-tsaina maditra toy izany, ity mpivady ity dia manana faharetana hamelombelona ny fifandraisana.
Ny lalao fitiavana Taurus sy Scorpio dia fifandraisana mahitsy avy any an-danitra! Taurus sy Scorpio dia fanahy mitady fahafinaretana. Noho izany, ity mpivady ity dia mitady ny antony mahasoa! Na eo aza ny fifandonana madinidinika mety hitranga, dia mitoetra ho matanjaka hatrany ny fisarihana azy ireo. Ny fifandraisana maharitra iray dia eo alohan'ny fahafaham-po ara-batana ho soatoavina fototra.
Ny olana lehibe indrindra amin'ity pairing romantika ity dia ny olana amin'ny fananana olona sy ny fialonana. Samy mitaky ny tsy fivadihana amin'ny lafiny rehetra. Rehefa misedra olana toy izany dia misy loza mitatao ho an'ny andry fitokisana. Taurus sy Scorpio dia afaka mitazona ny fialonana tsy hitaiza ny lohany ratsy tarehy. Ahoana? Amin'ny alàlan'ny fihazonana ny fifandraisana eo anelanelan'izy ireo. Ny fizarana fahatsapana sy ny firesahana momba ny tsy fandriampahalemana madinidinika dia mety hampitsahatra olana kely.
Taurus sy Scorpio dia hanana olana kely amin'ny fanaovana zavatra rehefa miresaka fitiavana. Ahoana ny hevitrao? Mifanaraka ve ianao sy ny vadinao? Manontany tena ve ianao momba ny fifandraisanao amin'ny famantarana zodiak? Zahao ny fampahalalana maimaim-poana ao amin'ny Daily Horoscope Astros! Ampiasao ny fampahalalana hanatsarana ny fifandraisanao ankehitriny. Na, atombohy amin'ny dian-tongotra mandeha am-peo miaraka amina fifandraisana vaovao amin'ny fitiavana izao!
Vakio rehetra momba ny famantarana Zodiac Taurus
Tsindrio raha hianaranao rehetra Toetoetra Taurus, toetranao ary toetrany !
Mitady fitiavana? Tsindrio raha hamaky rehetra Fifanarahana Taurus !
Makà fampahalalana lalina momba ny Lehilahy Taurus !
Mamaha ny zava-miafina ny Vehivavy Taurus !
Manana zanakavavy na zanaka lahy Taurus? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Ankizy Taurus !
Vakio rehetra momba ny Scorpio Zodiac Sign
Tsindrio raha hianaranao rehetra Toetoetra Scorpio, toetranao ary toetrany !
Mitady fitiavana? Tsindrio raha hamaky rehetra Fifanarahana Scorpio !
Makà fampahalalana lalina momba ny Scorpio Lehilahy !
Mamaha ny zava-miafina ny Vehivavy Scorpio !
Manana zanakavavy na zanaka lahy Scorpio? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Scorpio Ankizy !
Ny dikan'ny karatra tarika masoandro
Nomery 777 anjely: Inona no dikan'ny 777 amin'ny lafiny ara-panahy, fitiavana, isa ary ny dikan'ny Baiboly
Fifampifanarahana Gemini: Amin'ny fitiavana sy amin'ny fandriana
Ny fivarotana ny planeta anio
Toro-hevitra momba ny nofinofy - famantarana sy hevitry ny nofy
aquarius lahy libra vavy eo am-pandriana
maneho inona ny loko indigo?
inona ny dikan'ilay loko mainty